Xarumo Waxbarasho oo lacag la’aan ah oo laga hirgeliyay Degmada Dharkeynley | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Aqoon Guud Xarumo Waxbarasho oo lacag la’aan ah oo laga hirgeliyay Degmada Dharkeynley
Xarumo Waxbarasho oo lacag la’aan ah oo laga hirgeliyay Degmada Dharkeynley
Guddoomiyaha degmada Dharkeynley Macalin Cabdulle Cali Hilowle oo ay Wehliyaan maamulka Degmada ayaa waxa uu maanta xarigga ka jaray xarumo waxbarasho oo laga hirgeliyay xaafadaha Kaawo Godey iyo Foorilow oo ku yaala duleedka Muqdisho kana tirsan degmadaasi.
Munaasabaddii lagu furayay xarumahaasi ayaa waxaa ka qeyb galay odayaal dhaqameedyo iyo qeybaha bulshada ee ku nool degmada Dharkeynley, iyadoo mashruucaan lagu dhisay xarumaha Waxbarashada ay iska kaashadeen hay’adaha Dareyel daryeelka Bulshada iyo Un Habitat oo Qaramada Midoobay u qaabilsan horumarinta deegaanka.
Agaasimaha fulinta hay’adda daryeel bulsho Cabdullaahi Maxamuud Maxamed oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa sheegay in xarumahaasi loogu talagalay in si lacag la’aan ah wax loogu barro carruurta aan waalidiintooda awoodin inay geeyaan goobaha waxbarashada ee sida gaarka ah loo leeyahay, gaar ahaan ilaa iyo shan boqol oo arday, isagoo maamulka degmada Dharkeynleey ku wareejiyay furayaasha iskuuladaasi.
Cabdullaahi Xuseen Maxamed oo ku hadlayay magaca odoyaasha dhaqanka ayaa sheeegay in ay aad ugu faraxsanyihiin goobaha waxbarasho ee xaafadahaasi laga hirgeliyay, waxaana uu dowladda dhexe ee Soomaaliya ka codsaday in loo dhameystiro adeegyada aas aasiga u ah bulshada.
Guddoomiyaha Degmada Dharkeynleey Macalin Cabdulle Cali Hilowle oo ugu dambeyntii goobta ka hadlay ayaa hoosta ka xariqay in xaafadaha haatan laga hirgeliyay xurumahasi waxbarasho ay ahayeen kuwa aan haysan adeegyada bulshada maadaama ay ka fog yihiin magaalada, isagoo ugu mahadceliyay hay’adaha fuliyay mashruucaasi.
Goobaha waxbarashada ee laga hirgeliyay degmada Dharkeynleey ayaa waxa uu qeyb ka noqon doonaa mashruuca Aada Dugsiyada oo ay Waddo dowladda Soomaaliya.
Previous articleRaii’sal Wasaaraha Soomaaliya oo tillaabo cusub oo siyaasadeed ku dhaqaaqaya
Next articleSaxafadda iyo Af-Soomaaliga